Phandeeyar Blog Page 31
February 16, 2016 Yoon Tech
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ၊တနင်္ဂနွေက (၇) ကြိမ်မြောက် Barcamp Yangon ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အတွေ့ အကြုံတွေဖလှယ်ခြင်း နဲ့သင်ယူခြင်းတို့ အတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ အောက်ပါခေါင်းစဉ်တွေကို ဖန်တီးရာ ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားရင် ဖန်တီးရာကိုဆက်သွယ်ပါ။ Barcamp Yangon စီစဉ်သူတွေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်တစ်နှစ်အတွက် ကြိုတင်ရင်ခုန်နေပါပြီ။
*နည်းပညာအခြေခံတဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်ခြင်း – Lean Canvas အသုံးပြုခြင်းမိတ်ဆက်
*ဒီတော့သင် app တစ်ခု ဖန်တီးလိုပါသလား – ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ စည်းမျဉ်းများမိတ်ဆက်။
*လူထုအကျိုးပြု ကြိုးမဲ့စနစ်တည်ဆာက်ခြင်း – ချင်းပြည်နယ်မှရရှိသော အတွေ…
Last weekend was the 7th Barcamp Yangon. It was an awesome weekend of sharing and learning. The Phandeeyar team hadagreat time. Below are all the presentations we gave. Get in touch if you need more info on those subjects. Big thanks to the organizers and to everyone…
မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ဒဈဂဈြတယျ အခှငျ့အရေး အစီအစဥျတဈခုကို စတငျခွလှေမျးခွငျး
January 27, 2016 Michael Civil Society
LaunchingaDigital Rights Agenda for Myanmar
January 27, 2016 Aung Win Htut Civil Society, Tech
January 25, 2016 yan Hardware Hacking
For the first hardware related event at Phandeeyar in 2016, we decided to open up our budding makerspace to the public with an open house. We’ve hadafew hardware hackers come by to use our prototyping equipment in the last couple of months, but starting this January, we are ramping…